Kooxaha Premier League Oo Qaadaya Tallaabo Muhiim U Ah Iyo Codbixinta 20-ka Kooxood Oo Barri Dhacaysa. – Gool24.Net
Kooxaha Premier League Oo Qaadaya Tallaabo Muhiim U Ah Iyo Codbixinta 20-ka Kooxood Oo Barri Dhacaysa.
Horyaalka Jarmalka ee Bundesliga ayaa ah tusaalaha ay hadda hiigsanayaan kooxaha horyaalka Premier League kadib markii la ciyaaray kulamadii ugu horeeyay muddo laba bilood oo uu faraysku hakad galiyay xili ciyaareedka.
Barri oo isniin ah waxay noqon doontaa maalin aad muhiim ugu ah xili ciyaareedka Premier league waxayna kooxaha Ingiriiska iyo maamulka Premier league u balansan yihiin in cod la qaado.
Laakiin Premier League ayaa la ogaaday in ay hadda qaadayaan talaabo muhiim u noqon doonta in xili ciyaareedka dib loo bilaabo waxayna todobaadkan kooxaha Ingiriisku samayn doonaan baadhitaano 1000 ciyaartoy ah oo laga hubin doono caabuqa saf marka ah.
Kooxaha Premier League ayaa diyaar u ah in ay dhamaan ciyaartoyda kooxahooda mariyaan baadhitaano ka hor inta ayna tababarka buuxa ku soo laaban waxaana sidoo kale la ogaaday in xidig kastaba laba jeer la baadhi doono todobaadkii.
Ciyaartoyda kooxaha Premier League oo aad u badan ayaa dhamaantood lagu samayn doonaa baadhitaano caafimaad waxaana la mid noqon doona shaqaalaha tababarka iyo tababarayaasha si badqabka loo dhawro.
Kooxaha Premier League ayaa ka shaqaynaya qaabkii ay garoomada ugu soo laaban lahaayeen waxaana isniinta jiri doona kulan xaasaasi ah oo ay kooxaha Premier league ugu codayn doonaan qaabka xili ciyaareedka loo dhamaystiri doono.
FA-ga ayaa u dayriyay kooxihii waqti ku fikirayay in xili ciyaareedka halkii uu marayay lagu joojiyo waxaana hadda loo baahan yahay codka 14 kooxood oo maalinta isniinta ansixin doona qaabka ugu fiican ee xili ciyaareedka lagu dhamaystiri karo.
Maalinta Talaadada waxaa la filayaa in kooxaha Premier league ay tababarka ku soo laaban doonaan waxaana la filayaa in tababarka laga dhaqan galin doono waxyaabaha codka loogu ansixin doono shirka maalinta barri ee isniinta dhex mari doona 20 ka kooxood ee maamulka Premier league.
Marka todobaadkan ay kooxaha Premier League sameeyaan baadhitaanada 1000 ka ciyaartoy ah waxaa la filayaa in si buuxda loo diyaarin doono dhaqan galinta tilmaamo caafimaad oo qeexan oo ay kooxaha iyo ciyaartoydu raaci doonaan, waxaana door ku yeelan doonta dawlada UK.
Dawlada UK ayaa haddaba si rasmi ah ugu dhawaaqday in wixii ka danbeeya June 1 in ay kubbada cagtu bilaami karto, laakiin waxaa wali socda dadaalo lagu doonayo in qaabka ugu fiican ay kooxuhu iyo maamulada kubbada cagta England isla qaataan.
Si kastaba ha ahaatee, natiijada ka soo baxda codbixinta barri ee kooxaha Premier league ayaa saamayn wayn yeelan doonta waana mid aad loo sugayo.